Olee otú Hichapụ "Ndị ọzọ" na iPhone
Part1: Gịnị bụ "Ndị ọzọ" na iPhone
Dị ka ị ga-ahụ, e nwere otutu stof na-agwụ elu "Ndị ọzọ" na gị iPhone. Ma ọ bụrụ na ị dịghị ọcha ihe ndị a, ya Nwela chịkọbara na-adịghị anya ị ga-achọpụta na ọkara nke ndị ohere ẹka ọtọ site "Ndị ọzọ" na ngwaọrụ gị. Ya mere, i kwesịrị ịna-ihicha ihe.
Part 2: Olee otú Iji aka Hichapụ "Ndị ọzọ" na m P hone
Nzọụkwụ 1: Gaa Open Ntọala mgbe ahụ General na n'ikpeazụ iji rụọ ọrụ
Nzọụkwụ 2: Pịa na ọ bụla buru ibu ngwa
Nzọụkwụ 3: Documents & Data egosiputa n'ozuzu size nke data na-echekwara site na kpọmkwem ngwa.
Ị ga-ahụ na nke a na-eji ngwa onwe ya bụ N'eziokwu nnọọ obere. Na-esonụ image, ị ga-ahụ na-eji ngwa bụ 30,8 MB mgbe data echekwara bụ 135 MB. Nke a 135 MB bụ ihe n'ezie na-aga n'ime gị "Ndị ọzọ" data. Nke a data mejupụtara nchọgharị akụkọ ihe mere, ndekọ, kuki, caches nke foto na vidiyo, ngwa echekwara nchekwa data faịlụ.
Ihe ndị dị ka ndị dị otú ahụ-eme ma ị ga-dị nnọọ mkpa ka anya si a ụzọ maka n'enweghị ekpocha ndị a data otú e nwere bụ zuru ezu ohere na iPhone.
- Were a ndabere gị niile data site na iCloud (kama site na iTunes) ma ọ bụrụ na ị obi ụtọ na iCloud, ị ga-nabatara ndabere na iCloud.
- Ọzọkwa, jide n'aka - ugboro abụọ ma ọ thrice ego na ị nwetara gị niile ihe kwadoo.
- Tọgharia iPhone: Akpa Gaa na Ntọala mgbe ahụ General mgbe ahụ Tọgharia na mgbe ahụ Ihichapu ọdịnaya niile na Mwube
Nzọụkwụ 4: Ijikọ iPhone ka iTunes na Iweghachi si ndabere.
Ọ ọcha elu ọ bụla otu nwa oge faịlụ, kuki, cache na stof ka album nkà na steals a obere aru n'oge na nnukwu ichekwa free ohere. Nke a ọcha ọtụtụ ihe ma ọ bụghị dum ọtụtụ ga-arahụ, e ka ga-abụ ụfọdụ "Ndị ọzọ" data.
Ị ga-eme nke ọma adịkarịghị ihe doro anya site ngwa ọdịnala nke na-echekwa nnukwu data. Ọtụtụ nke ngwa nwere mmanya ka ihichapụ data onwe ya. Ebe ọ bụghị o kwere omume, na ị na-aga nwere na-amalite erasing data.
Ya mere na nke ahụ bụ banyere otú tufuo nke "Ndị ọzọ" data gị iPhone nke frustratingly na-egbochi gị nri gị iPhone.
Nkebi nke 3: Pịa onwe elu karịa Space n'ihi na gị na iPhone
Wondershare SafeEraser a na-eji na-adịgide adịgide ihichapu ihe niile n'enweghị nakwa dị ka ntukwasi-obi na ihe iPhone, iPad ma ọ bụ onye iPod. Ọ na-egbochi Identity Izu mgbe ere gị ochie ngwaọrụ na 1 Pịa "Clean wepụrụ ebubo" Nzuzo nchebe. Ọ na-eme gị onye ọmụma nchebe na-adịgide adịgide na-ewepu ya na SafeEraser n'ihu gị pụrụ gị ochie ngwaọrụ.
Atụmatụ nke Wondershare SafeEraser
Na-adịgide adịgide erases Ngwaọrụ - Mgbe ị na-Recycling, trading ma ọ bụ na-ere gị iPhone, na 1-Click ekwentị ihichapu nhọrọ nwere ike igwu na atọ n'ihi na ị na ihichapụ ihe niile na-adịgide adịgide n'ihu agafe na ngwaọrụ.
Okosobo Private Data & Free Up Space - SafeEraser ana achi achi na data na-echekwara na ekwentị gị ka na-eme nchọgharị na weebụ, na-eji ngwa, na-ezipu ozi, wdg mụ onwe. Ọ ga na-gị onwe data nchebe, n'ịnapụta ndị ohere.
Ọcha ratụ ratụ File - 1-Pịa cleanup ga-eme niile ezigbo gbapụrụ ọsọ site na iwepu niile junk faịlụ na ndị ọzọ na-enweghị isi data.
Otú iji ya onwe elu karịa ohere maka gị iPhone na nzọụkwụ na screenshots:
Nzọụkwụ 1: Download ngwa na wụnye ya.
Mgbe echichi, na-agba SafeEraser na kọmputa gị. Jikọọ gị iPhone site na eriri USB gị na kọmputa. Mgbe ngwaọrụ a ghọtara, ị ga-ahụ isi window mmapụta elu.
Na mmapụta elu window, ị ga-ahụ ohere ọmụma nke ngwaọrụ gị, tinyere ndị ọzọ 5 atụmatụ na nri.
Nzọụkwụ 2: 1-Pịa nzacha na mkpocha
Mbụ mma bụ 1-Click nzacha na mkpocha. Ị dị nnọọ mkpa pịa ya na scanning ga-amalite na ngwaọrụ gị-akpaghị aka.
Mgbe scanning-agwụ agwụ, ị ga-ahụ na ọnụ ọgụgụ nke junk faịlụ egosipụta. Ugbu a ị chọrọ ka pịa "nzacha na mkpocha" n'ihi na gwakwara elu ngwaọrụ gị ohere.
Jide n'aka na ị na-ngwaọrụ gị ejikọrọ mgbe scanning usoro completes, ka unu hụ na junk faịlụ na-kpochara kpamkpam.
Mgbe ị ga-eme na cleanup, ị ga-ahụ na window ga-apụta dị ka ndị a, na-egosipụta na ohere ọmụma nke ngwaọrụ gị.
Mgbe nke a, ị nwere ike ma na-aga azụ Home peeji site na ịpị "Home" ma ọ bụ pịa "Rescan" ka iṅomi ngwaọrụ gị otu ugboro ọzọ.
> Resource> ihichapu> Olee otú iji Hichapụ "Ndị ọzọ" na iPhone